Mucjiso Layaab Leh Oo Ka Dhacday Magaalada Baydhabo Ee Dalka Soomaaliya. - iftineducation.com
Mucjiso Layaab Leh Oo Ka Dhacday Magaalada Baydhabo Ee Dalka Soomaaliya.
aadan21 / January 25, 2012
Iyadoo dhacdooyinka la-yaabka leh ay marar badan ku soo noq-noqoyaan qaar kamid ah Gobolada dalkeena Soomaaliya ayaa 10-kii bishii November ee sanadkii aan ka soo Gudubnay ayaa waxa lagu arkay magaalladda Baydhabo arin ka wada yaabisay dadka noqotayna Mid fajac iyo layaab leh.
Dadka ku nool magaaladda baydhabo haweeney kamid aheyd ayaa mas uu ku Duub-duubmay, Maska ayaa sida la sheegay haweynayda kaga duubmay dhabarka waxaana uu maska u diiday haweyneyda in ay hadasho, dadka deegaanka oo u soo gurdmaday haweeneyda ayaa waxa ay Ku guul dareysteen in ay maska ka fujiyaan. Mid kamid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay wargeysa dacwah oo ka soo baxa dalka Malaysia, in markasta oo ladoono in la-dilo maska ama laga fujiyo haweeneyda uu ku sii duub-duubmo.
Waxaa soo baxaya warar is-qilaafsan oo ku saabsan dhacdadaan la-yaabka leh ee ka dhacday magalladda Baydhabo , balse dad ku dhaw dhaw haweeneyda uu maska ku duub-duubmay ayaa xaqiijiyay in haweeneyda Ay dhibaato ku heysay wiil ay dhashay oo ay ka furtay ilaa 9 haween ah ee uu qabay.
Wararka ayaa waxaa intaas ku darayaan inuu iskiis iskaga tagay maskii haweeneyda ku duub-naa.
Amuurtaan ayaa waxa ay noqoneysaa markii ugu horeysay oo ay ka dhacdo magaaladda Baydhabo, Waxaana ay dadka deegaanku ku tilmaamneen mid kamid a mucjisooyinka Alle.
Ugu danbeen culumaa’udiinka deegaan ayaa waxa ay dadka reer Baydhabo kula taliyeen in Alle ka cabsigiisa la-badiyo xarigiisana ay qabsadaan, taa oo ah mida kaliya ee qeyr lagu kasban karo.
Daraasaad – Gabdhaha China Way Ka Ad-adagyihiin Ragooda?
Qoysaska kala maqan dalka Sweden oo ay neef kasoo fuqday?